XIX-XX शताब्दीयौंदेखि पालो जापान तेजी विकास गरे। यसको सैन्य शक्ति हुर्किसकेका छ एक सानो, आर्थिक अवस्था स्थिर छ। 1895 चीन विरुद्ध विजयी अभियान जापान Liaodong प्रायद्वीप प्राप्त थियो जो एक परिणाम रूपमा पूरा भएको थियो। तथापि, तीन प्रमुख युरोपेली शक्ति, जर्मनी, फ्रान्स र रूस देखि दबाब, त्यो चिनियाँ क्षेत्रमा आफ्नो दावी परित्याग गर्न बाध्य भएको थियो। निस्सन्देह, तीन शक्तिहरु प्रत्येक आफ्नै चासो पछि लाग्दा। दुई वर्ष भित्र, रूसी सेना सम्पूर्ण Liaodong प्रायद्वीप कब्जा। र 1898 मा, चीन 99 वर्ष को लागि रूस बाहिर यो दिन बाध्य भएको थियो। यसरी, रूसी-जापानी युद्ध को पहिलो कारण 1895 मा आयो, जब चीन र कोरिया मा प्रभाव क्षेत्रहरू को विभाजन।
हानि जापान Liaodong प्रायद्वीप कडा militaristic विरोधी-रूसी देश मा भावनाहरू प्रभावित। उच्चतम लक्ष्य लागि कराधान वृद्धि सहनु गर्न मानिसहरूलाई भनिन्छ सरकार।
चीन मा रूस को चासो को क्षेत्र मात्र पोर्टअर्थर नियन्त्रण स्थापना सीमित छैन। लागि विनिमय मा साम्राज्य को सरकार एक निर्माण गर्न अनुमति मंचूरिया इलाका मार्फत पारित भ्लाडिभास्तोक गर्न रेल, चीन जापानी क्षतिपूर्ति तिर्न एक ऋण जारी। यस्तो कार्यहरू फलस्वरूप, यस चीन-जापानी युद्ध को लगभग सबै फल, रूस कटनी। त्यो Manchurian क्षेत्रमा एक ठूलो भाग प्राप्त Liaodong प्रायद्वीप र पोर्टअर्थर वास्तवमा रूसी नियन्त्रणमा आए। यो रूसी-जापानी युद्ध दोस्रो कारण थियो।
1896 मा त्यो प्रभाव क्षेत्रहरू को विभाजन मा एक सम्झौतामा हस्ताक्षर कोरियाई प्रायद्वीप। उहाँलाई अनुसार, रूस उत्तरी प्राप्त, र जापान छ - दक्षिण कोरिया। एकै समयमा रूसी सरकार, नदी Yala को बैंकहरू मा भूमि को तोकिएको ठूलो षड्यन्त्र लागि काल्पनिक सञ्चालनका एक नम्बर। कोरिया मा सेना को सामग्रीको व्यवस्था प्रयोग गरेर Chemulpo पोर्ट मा cruiser "Varyag" र gunboat "कोरियाली" प्रविष्ट गर्नुभयो। यसरी रूसी सरकार यसको प्रभाव कोरिया को दक्षिणी भाग मा पहिले देखि नै छ विस्तार गर्न थाले। अगाडी को पहिले नै राम्रो कारण रूसी-जापानी युद्ध वृद्धि।
1900 मा, एक विद्रोह चीन मा बाहिर भङ्ग। विद्रोहीहरूको देश सबै विदेशीहरू को expulsion माग। प्रतिक्रिया, निकोलस द्वितीय को समर्थन मा सेना पठाएको को महारानी Tzu-सागर। धेरै महिना, किसान को unorganized ठूलो पराजित भएको थियो, र रूसी सेना उत्तरी चीन सम्पूर्ण क्षेत्रमा नियन्त्रण गरे। विरोध को टिप्पणीहरू भए तापनि अगाडि चिनियाँ द्वारा राख्नु, रूसी सेना तिनीहरूले कब्जा इलाका बाँकी छैन। यसबाहेक, आफ्नो कार्यहरू देखाउन सार मा उत्तरी चीन सबै रूसी साम्राज्यको एक बस्ती भए।
निकोलस द्वितीय र आफ्नो क्याबिनेट को भोक उठ्नुभयो। को यूरेशियन महादेशमा को पूर्वी भाग नियन्त्रण स्थापना को दोस्रो चरण सुरु भयो। को नियन्त्रण क्षेत्रहरूमा उत्तरी कोरिया को Chemulpo मा सैन्य fortifications को निर्माण सुरु खाडी फ्लिट प्रविष्ट गर्नुभयो। उत्तरी चीन को अवस्था दक्षिण कोरिया मा नै बारम्बार खतरनाक। जापान यसको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस् र पहिलो हिट भएन।
त्यसैले, रूसी-जापानी युद्ध को कारण के हो? सारांश - यो नै क्षेत्र मा एक साधारण चासो छ। र रूसी, जापानी र shamelessly उत्तरी चीन र कोरिया लुटेका। हामी अंक को रूसी-जापानी युद्ध को कारण विस्तार भने यो जस्तै केहि हेर्नेछौं:
- दुवै देशहरूको चासो को संयोग;
- शत्रु को गलत मूल्यांकन;
- रूसी सरकार पनि brazenly हालको वास्तविकताहरु बेवास्ता गरे।
एउटै कारण मा रूसी-जापानी युद्ध रूसी हतियार को लज्जाजनक विफलता गर्न पुगे। रूस पूर्ण पूर्वी क्षेत्रहरूमा बहिष्कार गरिएको छ, र पनि नष्ट दक्षिणी सखलिन।
ग्रीक मिथकों: Daedalus र Icarus। को पौराणिक कथा तस्वीर को सारांश
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध: युद्धमा को कदम
ओल्गा Ushakova, टिभी प्रस्तोता: जीवनी, पेसा, व्यक्तिगत जीवन
सर्जन लियोनिद Rogozov: जीवनी र फोटो
को पारित स्कोर के हो
एक चंचल तरिकामा चिकन बारेमा पहेली
बच्चाहरु को लागि सुरक्षित लामखुट्टे विकर्षक। बच्चाहरु को लागि लामखुट्टे विकर्षक
क्रिसमस ट्री पंख को गरे। कसरी आफ्नो हातमा एक सुन्दर Ornamental रूख बनाउन सिक्न
छेद तालु उपचार र सुधार। एक बच्चा एक छेद तालु छ भने के गर्ने? छेद ओठ र तालु
लियोनिद Kalashnikov: तस्बिर र जीवनी